पत्रकार सम्मेलन छाडेर हिँडिदिने डोनल्ड ट्रम्पको धम्की !!!
‘मर्यादापूर्वक’ प्रस्तुत नभए भविष्यमा पत्रकार सम्मेलन छाडेर हिँडिदिने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पले धम्की दिएका छन्। सीएनएनका पत्रकार जिम अकोस्टाको अमेरिकी सिक्रेट सर्भिसद्वारा खोसिएको प्रेस पास फिर्ता गर्न वाशिङटन डीसीस्थित एउटा अदालतले आदेश दिएपछि ट्रम्पको धम्कीपूर्ण अभिव्यक्ति आएको हो। यसै महिनाको शुरूतिर एउटा पत्रकार सम्मेलनमा राष्ट्रपति ट्रम्पसँग वादविवाद भएपछि अकोस्टाको प्रेस
भगवानको नाम लिदै यौन प्यास मेटाउने बाबालाई गाउँले हरुले यस्तो गरे पछि ….
हाम्रो समाजमा धर्मको नाममा अन्य जघन्य अपराध गर्ने ढोगी बाबाको कुनै कमि छैन् । भग्वानको नाममा सोजा भक्तजनलाई ठग्ने लुटने त थाहा भाकै कुरा हो । सोझा महिलालाई ललाइ फकाइ गरी यौन तृष्ण मेटाउने बाबालाई गाँउलेले पोलमा बाधेर कुटपिट गरेका छन् । भारतको एक गाउँका सोझा भक्तजनलाई आश्वासन दिएर आफ्नोे
आइफोन एक्समा भाइरस, प्रयोगकर्ताले डिलिट गरेका तस्वीर पनि ह्याकरको हातमा
आज कलका युवाको लोकप्रिय मोवाइल आइफोन एक्समा बग अर्थात् भाइरस आक्रमण भएको छ । उक्त बगको सहायताले ह्याकरहरुले प्रयोगकर्ताका तस्वीरमाथि धावा बोल्न सफल भएका छन् । जसका कारण प्रयोगकर्ताले फोनबाट पहिले नै डिलिट गरिसकेका तस्वीरहरु समेत ह्याकरहरुले हात पार्न सफल भएका छन् । सफारी ब्राउजरको माध्यमबाट ह्याकरहरुले यस्तो सफलता प्राप्त
बक्सिङ रिङभित्रै १३ वर्षीय बालकको मृत्यु भए पछि…
बक्सिङ रिङमै एक बालकको मृत्यु भएको छ । थाइल्यान्डमा भएको बक्सिङ खेलमा १३ वर्षीय बालकको मृत्यु भएपछि चौतर्फी बिरोध भएको हो । मुआए थाई मार्सल आर्ट भनिने पाशविक एवं निर्मम खेलमा बालबालिकाले खेल्न नपाउने गरी प्रतिबन्ध लगाउन फेरि आवाज उठेको छ । थाई बक्सिङ देशैभर निकै लोकप्रिय छ र युवा
डोनाल्ड ट्रम्पको गाडी रोक्न युवतीले सडकमा नाङ्गै प्रदर्शन ( भिडियो सहित )
अमेरीकाको राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको बिरुद्ध एक युवतीले नंगन प्रर्दसन गरेकि छिन् । फ्रान्सको पेरिसमा प्रथम विश्वयुद्धको सय वर्ष पूरा भएको सम्झनामा आयोजित कार्यक्रममा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको विरोधमा उक युवती टपलेस भएर सडकमा उत्रिएकी छिन् । उनले सुरक्षा घेरा तोड्दै ट्रम्पको गाडीअगाडि जाने प्रयास गरिन् । तर, सुरक्षाकर्मीले उनलाई रोके
मध्यरातमा एक्कासी घरभित्र सिंह पसेपछि… ( भिडियो सहित )
जंगलको नजिकै गाउमा एक किसानको घरमा रातको अँध्यारोमा सिंहिनी घरभित्र पस्दा घरका मान्छेहरु घरबाहिर बसेर रात काटेका छन् । घट्ना भारतको गुजरात राज्यको अमरेलीको हो । जिल्लाको खांभामा जंगलबाट बाटो बिराएकी सिंहिनी किसानको घरमा पसेकि हो । मानिसहरुले उसलाई घरभित्र जाँदै गरेको देखेका थिए त्यसैले झुक्किएर कोही घरभित्र पस्ने खतरा
पशुलाई झै १२ वर्षका बालकलाई बाँधेर कुटे पछि….
एक अबोध बालकलाई पशु सरह कुटेको भिडियो सामाजिक संजालमा भाइरल भइरहेको छ । १२ वर्षका बालकलाई चोरी गरेको आरोपमा कुटिएको बताइएको छ । भिडियो उत्तर प्रदेशको श्रावस्ती जिल्लाको गणेशपुर गाउँको भएको सामाजिक संजालमा उल्लेख छ । गाउँकै उक व्यक्तिले बालकलाई बाँधेर डोरीले पशुझैं कुटेका हुन् । कुट्ने व्यक्तिले बालकमाथि खेतबाट
उभिएर यात्रा गरीरहेकि युवतीलाई पछाडि बाट एक्कासी युवकले यस्तो गरे पछि ….
समाजमा महिला हिसां दिन दिनै बढि रहेका छन् । फेरी भारतको बैंगलोरमा एक सवारीमा लाज मर्दो हर्कत भएको छ । भारतको बैंगलोरको मेट्रोमा एक युवकले सार्वजनिक सवारीमा लाज मर्दो हर्कत गरेपछी यात्रीले कुटपिट समेत गरेका छन। मेट्रोमा यात्रा गरिरहेका एक युवकले उभिने क्रममा आफ्नो गुप्तांग बाहिर निकालेर हर्कत देखाउदै एक
दुर्घटनामा परेकी आमाको गर्भ चिरिएर सडकमा निस्किएको बच्चा बाँच्न सफल ! ( भिडियो सहित )
एक भयानक दुर्घटनामा एक बालिका अप्रत्याशित रुपमा बाँच्न सफल भएकी छन् । काठले भरिएको एक ट्रकमा गर्भवती महिला यात्रा गरिरहेकी थिइन् । यात्राका क्रममा साओ पाउलो र क्युरिटिबाबीचको सडकखण्डमा ट्रक दुर्घटना भयो । ती गर्भवती महिला ट्रकभित्रको काठले थिचिनुअघि ट्रकको क्याबिनबाट उछिटिएर बाहिर पुगिन् । जसका कारण ती महिलाको पेट
राष्ट्रिय गान अपमान गरेको अभियोगमा एक युवती पक्राउ
राष्ट्रिय गानको अपमान गरेको अभियोगमा एक जना चिनियाँ भिडियो स्टारलाई पाँच दिन प्रहरी हिरासतमा राखेर छोडिएको छ। चीनको राष्ट्रिय गान कानुनले २१ वर्षीया याङ काइलीलाई दण्डित गरेको हो। अक्टोबर ७ मा उनले एउटा भिडियो पोस्ट गरेकी थिइन्। भिडियोमा उनी चीनको राष्ट्रिय गान गुनगुनाइरहेकी थिइन्। खास अनुशासनमा रहेर गाउनुपर्ने गानमा उनी